Banaanbax Kiiska Ikraan la xiriira oo ka dhacay Gaalkacyo | KEYDMEDIA ONLINE
Banaanbax Kiiska Ikraan la xiriira oo ka dhacay Gaalkacyo
Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa u balan-qaadey qoyska Ikraan inay Gabadhooda Cadaalad heli doonto, isagoo gudi u xil-saarey baaritaanka.
GAALKACYO, Soomaaliya - Boqolaal qof oo rag iyo dumar isagu jira ayaa Maanta Banaanbax ka dhigay Koonfurta magaaladda Gaalkacyo, qeybta Galmudug ay maamusho.
Dibadbaxa ayaa taageero loogu muujinayay dedaallada uu wado Rooble ee cadaaladda loogu raadinayo Ikraan Tahliil, oo lagu dhex dilay hay'addii ay katirsanayd ee NISA.
Dadka isagu soo baxay wadooyinika ayaa watay boorar ay ku qoran yihiin hal-ku-dhigyo ay kamid yihiin "Cadaalad ka hesho Ikraan", waxayna ku baaqeen in Maxkamad laso taago kuwa falka dilka ka dambeeyay.
Waxay banaanbaxayaasha wax laga xumaado, oo aan la aqbali karin ku tilmaameen inay cadaaladda ka baxsadaan Fahad Yaasiin, Kulane Jiis iyo Yaasiin Fareey oo kiiskan u eedeysan.
Banaanbaxa Gaalkacyo ayaa noqonaya midkii ugu horeeyay oo ka dhaca meel ka baxsan Muqdisho, waxuuna muujinaya in Kiiska Ikraan uu taabtay qof kast, meel kastoo ku sugan yahay.
Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa u balan-qaadey qoyska Ikraan inay Gabadhooda Cadaalad heli doonto, isagoo gudi u xil-saarey baaritaanka kiiskeeda, oo noqday mid heer qaranka ah.
Ikraan oo u shaqeynaysa NISA tan iyo 2017 ayaa la waayay 26-kii June 2021, kadib markii la afduubey, iyadoo mudo kadib Nabad Sugida sheegtay in Al-Shabaab ay dishay Gabadha.
Al-Shabaab ayaa beenisay eedeynta, waxayna iska fogeysay inay wax lug ah ku leedahay kiiskan xasaasiga ah, oo hadda ku biyo shubtay Fahad Yaasiin iyo kuwa ku xeeran.
0 Comments Topics: gaalkacyo soomaaliya